HORDHACA: Hull v Liverpool- Sadio Mane ooDiyaar ah Xili Klopp uu Doonayo inuu Soo Afjaro abaarta guul’aanta kooxdiisa | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » HORDHACA: Hull v Liverpool- Sadio Mane ooDiyaar ah Xili Klopp uu Doonayo inuu Soo Afjaro abaarta guul’aanta kooxdiisa
HORDHACA: Hull v Liverpool- Sadio Mane ooDiyaar ah Xili Klopp uu Doonayo inuu Soo Afjaro abaarta guul’aanta kooxdiisa	Liverpool ayaa dooneysa in ay soo afjarto orodkii ugu xumaa Horyaalka iyadoo Jurgen Klopp uu booqan doono kooxda Hull City saacadu marka ay tahay 6:00 Maqribnimo.
kooxda Klopp ayaa badisay kaliya hal kulan sagaalkii kulan ee ugu danbeyay tartamada oo dhan waxana ay guul la’aan ay yihiin afartii kulan ee ugu danbeysay horyaalka oo ay bananaka kusoo ciyaareen.
Waxay 1-1 la galeen Chelsea bartamihii Isbuucii hore, laakiin natiijadaas ayaa ku qasabtay in ay 10 dhibcood ujiraan kooxd macalin Antonio Conte ee Chelsea.
Liverpool ayaa 5-1 kaga badisay kooxda Hull City kulan ka dhacay Anfield horaantii xilli ciyaareedkaan,markaasoo 32 darbo loo diiwaan geliyay kooxda Reds.
Si kastaba ha ahaatee, tababaraha cusub ee Tigers Marco Silva ayaa badiyay dhamaan seddexdii kulan ee gurigiisa uu ku ciyaaray tartamada oo dhan tan iyo markii uu bedelay Mike Phelan bishii January.
wiilasha cusub ee Kamil Grosicki iyo Alfred N’Diaye ayaa labada ciyaari doonaa kulanka Hull ay wajaheyso Liverpool.
Andrea Ranocchia ayaa sidoo kale kusoo bilowan kara kulankiisii ugu horeyay ee Tigers ka dib markii uu kursiga keydka kusoo bilowday kulankii Manchester United ee bartamihii Isbuucii hore.
Dieumerci Mbokani ayaa la heli karaa ka dib markii uu ka soo laabtay koobka qaramada Afrika, lakiin Ahmed Elmohamady ayaa weli maqan iyadoo Lazar Markovic uusan wajihi karin kooxda iska leh ee Liverpool.
weeraryahanka Sadio Mane ayaa qarka u saaran inuu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horeeyay kooxda Liverpool tan iyo January 2.
Weeraryahanka ayaa kasoo laabtay koobka qaramada Afrika horaantii isbuucii hore , waxaana uu bedel ku soo galay kulankii Chelsea ee talaadadii, laakiinse haatan diyaar ayuu u yahay inuu kusoo bilowdo.
Daafaca midig ee Nathaniel Clyne ayaa ku maqan dhaawac feeraha ah, laakiin tababare Jurgen Klopp ayaa ka fakirayaa sidii uu ku heli lahaa.
James Milner ayaa si toos ah ugu lug lahaa lix gool lixdii kulan ee ugu danbeysay Premier League ee uu la ciyaaray kooxda Hull City (shan gool, hal caawin ayuu sameeyay).
Hull ayaa ah kooxda kaliya ee wali aan shabaqeeda gool ka ilaalin marka ay gurigeeda ku ciyaareyso Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana laga dhaliyay 11 kulan oo ay ku ciyaartay KCOM Stadium goolal.
Klopp ayaa kujira waqtigiisii ugu dheeeraa ee uusan gul gaarin Horyaalka tan iyo bishii Febraayo 2015 markaas oo uu ahaa tababaraha kooxda Borussia Dortmund.
Milner ayaa saddex rigoore dhaliyay Premier League xilli ciyaareedkan – Steven Gerrard oo (8) dhaliyay xili ciyaareedkii 2013/14 ayaa ka badan rigoorooyinka hal xilli ciyaareed loo dhaliyo Reds.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/hordhaca-hull-v-liverpool-sadio-mane-oodiyaar-ah-xili-klopp-uu-doonayo-inuu-soo-afjaro-abaarta-guulaanta-kooxdiisa/">HORDHACA: Hull v Liverpool- Sadio Mane ooDiyaar ah Xili Klopp uu Doonayo inuu Soo Afjaro abaarta guul’aanta kooxdiisa</a>